नेपाल लाइफको खुद नाफा २००% ले वृद्धि हुँदा अरु सूचकमा कस्तो छ प्रगति ?
ARCHIVE, MARKET WATCH » नेपाल लाइफको खुद नाफा २००% ले वृद्धि हुँदा अरु सूचकमा कस्तो छ प्रगति ?
काठमाडौं - चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा नेपाल लाइफ इन्सुरेन्सले २००.९३ प्रतिशत खुद नाफा कमाएको छ । कम्पनीले खुद नाफा १७ करोड ७४ लाख ५४ हजार ८० रुपैयाँ रहेको छ भने गत वर्ष यही अबदीमा ५ करोड ८९ लाख ६७ हजार ५८ रुपैयाँ मात्र खुद नाफा कमाएको थियो । यता, नेपाल लाइफको खुद बिमा शुल्क पनि ४१.०९ प्रतिशतले बृद्धि भएर ३ अर्ब ७५ करोड ३९ लाख ४ हजार ८२० रुपैयाँ पुगेको छ । गत वर्ष कम्पनीले २ अर्ब ६६ करोड ५ लाख ६२ हजार रुपैयाँ खुद बिमा शुल्क आर्जन गरेको थियो । पुनर्बिमा कमिसन आयमा भने कुनै परिवर्तन भएको छैन ।
यो त्रैमाससम्ममा नेपाल लाइफको पुनर्बिमा कमिसन आय २० लाख रुपैयाँ देखिएको छ । नेपाल लाइफले यो त्रैमासम्ममा १ अर्ब १८ करोड ६ लाख २४ हजार ९६ रुपैयाँ खुद दाबी भुक्तानी गरेको छ । गत वर्ष ५८ करोड ६१ लाख ५४ हजार ६०८ रुपैयाँ खुद दाबी भुक्तानी भएको थियो । यसैगरी, कुल दाबी भुक्तानी १ अर्ब २० करोड ४६ लाख ८५ हजार रुपैयाँ गरिएको छ । चुक्ता पुँजी ३ अर्ब ९ करोड ६४ लाख २८ हजार ६२५ रुपैयाँ रहेको नेपाल लाइफको जगेडा कोषमा ४ अर्ब ८६ करोड ६० लाख ३६ हजार ४११ रुपैयाँ छ । यो जगेडा कोषले पनि लगानीकर्ता आकर्षित गर्ने देखिन्छ ।
जगेडा कोषमा आकर्षक पैसा हुँदा कम्पनीको वित्तीय स्वास्थ्य मजबुत रहेको पनि बुझ्न सकिन्छ । यो त्रैमाससम्ममा बिमा शुल्क आर्जनमा पनि नेपाल लाइफले ४०.६०% ले बढोत्तरी गरेर ३ अर्ब ८० करोड १५ लाख ९९ हजार रुपैयाँ पुर्याएको छ । गत वर्ष २ अर्ब ७० करोड ३७ लाख ९७ हजार रुपैयाँ मात्र बिमा शुल्क आर्जन भएको थियो ।
कम्पनीको जीवन बिमा कोषको ४३ अर्ब ३६ करोड ५३ लाख २३ हजार ९४६ रुपैयाँ बराबरको भएको छ । गत वर्ष बिमा कोषमा ३४ अर्ब २८ करोड ९८ लाख ३ हजार ८६ रुपैयाँ मात्र थियो । जीवन बिमा कोषको आकार बढ्दै जानुले कम्पनी थप प्रगति गर्दैछ । व्यापारको आयातन पनि फराकिलो बनाउँदै गएको छ भन्ने बुझ्न सकिन्छ । नेपाल लाइफले महाविपत्ति कोषमा २६ करोड ५४ लाख ५५ हजार १२९ रुपैयाँ छुट्याएको छ । कम्पनीको प्रतिसेयर आम्दानी २२ रुपैयाँ ९२ पैसा र प्रतिसेयर नेटवर्थ २६५ रुपैयाँ ७२ पैसा छ ।